गठिया बाथ के हो ? यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने ? – Nepali Health
गठिया बाथ के हो ? यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
२०७५ साउन १८ गते १०:०५ मा प्रकाशित
डा श्वेता नकर्मी
डा. श्वेता नकर्मी, बाथरोग विशेषज्ञ
चिकित्साशाास्त्र अध्ययनमा छात्राको संख्या कम गर्न प्रवेश परीक्षामै अङ्क फेरवदल
मनाङ : मुना चुडिदिँदा लोप हुँदैछन् हिमाली जडिबुटी